I-China L-Tryptophan CAS 73-22-3 yeeGrade zokutya (i-FCC / AJI / USP) abavelisi kunye nabathengisi | Ndiyabulela
I-L-Tryptophan CAS 73-22-3 yeBakala lokutya (i-FCC / AJI / USP)
Igama lemveliso:: I-L -ptptophan
I-L-Tryptophan (Isifinyezo sokuzama) yenye yeezinto ezibaluleke kakhulu ebantwini nakwizilwanyana. Kodwa ayinakuhlanganiswa ngumzimba.
Njengamanye ama-amino acid, i-L-Tryptophan yenye yeebhloko zokwakha zeprotheni. Kodwa ngokungafaniyo nezinye ii-amino acid, i-L-Tryptophan ithathwa njengeyona ibalulekileyo kuba umzimba awukwazi ukwenza owayo. U-L-Tryptophan udlala indima enkulu kwizilwanyana nakubantu ngokufanayo. Kodwa mhlawumbi okona kubaluleke kakhulu, sisandulela esibalulekileyo kwinani lee-neurotransmitters kwingqondo. Kananjalo, i-L-Tryptophan kuphela kwento yesiqhelo efumaneka kukutya okunokuguqulwa kube yi-serotonin. Kuba i-serotonin iguqulwe kwingqondo yaya kwi-melatonin, i-L-Tryptophan ngokucacileyo idlala indima ekulinganiseni imeko kunye neepateni zokulala.
Isetyenziswa njengesongezelelo sesondlo kunye ne-antioxidant.
1. Isetyenziswe ekutyeni kwezilwanyana ukuphucula ukutya kwezilwanyana, ukunciphisa amandla oxinzelelo, ukuphucula ukulala kwezilwanyana.
2. Isetyenziswe kukutya kwezilwanyana ukwandisa i-antibody yemveku engekazalwa kunye neebhokhwe ezincinci.
3. Isetyenziswa ekondlwini kwezilwanyana ukuphucula ukhuseleko lobisi lweenkomo zobisi.
4. Isetyenziswe ekutyeni kwezilwanyana ukunciphisa umyinge weeprotheyini eziphezulu kunye nokugcina iindleko zokutya.
Njengesongezelelo sesondlo, i-L-tryptophan kukwenza ii-amino acid infusions kunye namalungiselelo e-amino acid kunye nezinye ii-amino acid.
I-L-tryptophan yenziwa yi-microbial fermentation ethi iswekile, isicatshulwa se-amonium, isulfate zisetyenziswe njengezinto ezingafunekiyo kwaye zicocwe kukuhluza inwebu, ukutshintshiselana nge-ion, ukwenza isikristale kunye nenkqubo yokomisa.
Umba FCCIV AJI92 I-USP32
Inkangeleko Mhlophe ngekristale etyheli kancinci okanye umgubo wekristallini Mhlophe ngekristale etyheli kancinci okanye umgubo wekristallini -
Uvavanyo (kwisiseko esomileyo) 98.5% ~ 101.5% 99.0% ~ 100.5% 98.5% ~ 101.5%
Ixabiso le-PH - 5.4 ~ 6.4 5.5 ~ 7.0
Ujikelezo oluthile -30.0 ° ~ -33.0 ° -30.0 ° ~ -32.5 ° -29.4 ° ~ -32.8 °
Ukudluliselwa - ≥95.0% -
Ikloridi (njengeCl) - ≤0.02% .00.05%
Ammonium (njenge-NH4) - ≤0.02% -
Sulphate (njenge SO4) - ≤0.02% ≤0.03%
Intsimbi (njengo-Fe) - ≤0.002% ≤0.003%
Isinyithi esinzima (njenge-Pb) ≤0.002% 0.001% 0.0015%
IArsenic (njengoko) 0.00015% 0.0001% -
Ezinye iiamino acid - ngqinelana -
Ukuphulukana nokomisa ≤0.3% ≤0.2% ≤0.3%
Intsalela kwi ucinezelo ≤0.1% ≤0.1% ≤0.1%
Egqithileyo L-Phenylalanine CAS 63-91-2 kwiBakala lokutya (FCC / USP)
Okulandelayo: I-DL-Methionine CAS 59-51-8 yeBakala yePharma (USP / EP)
I-L-Methionine CAS 63-68-3 yeBanga lokutya (AJI / USP)
L-Phenylalanine CAS 63-91-2 kwiBakala lokuTya (FCC / ...
L-valine CAS 72-18-4 kwiBakala lokutya (AJI USP)
I-DL-Methionine CAS 59-51-8 yeBanga lokutya (i-FCC / A ...
Ikhemesti yeBakala L-Leucine, L-Threonine Pharm kwiBakala, Ukutya kwezilwanyana, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine kwiBakala lokutya, I-L-Valine 72-18-4,